R/wasaare Gaas oo beeniyey in waftiga dawlada Somaliya ay ka baxeen khudbadii M/weyne Ahmedinejad. – Radio Daljir
R/wasaare Gaas oo beeniyey in waftiga dawlada Somaliya ay ka baxeen khudbadii M/weyne Ahmedinejad.
Copenhagen, Sept 26 – R/waraasaha xukuumada federaalka ah ee Somaliya Prof. C/weli Maxamed Cali ‘Gaas’ ayaa beeniyey warar ay saxaafadu baahisay oo dhigaya in waftiga dawlada Somaliya ee uu isagu hogaaminayey ay ka baxeen khudabadii M/weynaha dalka Iran Ahmedinejad uu ka jeediyey fadhiga golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee New York.
“Cid aan uga baxnay shirka ma jirto …arintaas wax ka jiraa ma jiraan” ayuu yiri R/wasaare Gaas.
R/wasaare Gaas ayaa sheegay in laga yaabo in lagu qalday jasaa’irka Somoa oo hortooda fadhiyey ama Solomon oo iyana fadhiyey bidixdooda.
“Haddii aan magacyada la isku qaldaynin, Somaliya waftigeedu waa uu fadhiyey, waana uu joogay” ayuu yiri R/wasaare Gaas.
R/wasaare Gaas oo u waramaya VOA, qaybta Somaliga ayaa intaas ku daray in isaga iyo waftigiisu ay ku qado beeleen dhegaysiga khudabada M/weyne Ahmedinaja, aanayna waxba ka jirin warar sheegaya in ay ka baxeen khudabada.
R/wasaare Gaas iyo wafti uu hogaaminayo ayaa in dhawaale ku sugnaa Waqooyiga Amerika, hadana ku sugan dalka Denmark oo uu ka dhici doono shir lagu gorafaynayo arrimaha Somaliya.